यौनको भर्‍याङ मा हो प्रेम ? |
प्रकाशित मिति :2017-09-13 10:59:57
भैरहवा विमानस्थल पुग्न ई–रिक्सा चढेकी थिएँ । चालक अब्ररार हुसैनसँग कुराकानी चल्यो । यसै क्रममा मेरो साथीले जिस्काएरै अब्ररारलाई सोधेको थियो, ‘गर्लफ्रेन्ड छ होला नि, होइन भाइ ?’‘प्रेम अरूसँग छैन साब ! राति–राति हो बूढीसँग मात्र ।’